सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्रीसँगै फर्किएको प्रश्न – Khabar Silo
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरबाट स्वास्थ्योपचार गराएर शुक्रबार स्वदेश फर्किएलगत्तै अब घरेलु राजनीति गर्माउने विश्लेषण/अनुमान गर्न थालिएको छ ।
विद्यमान पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाको विश्लेषण गर्दा चारवटा प्रश्नमाथि बहस र विवाद भइरहेको देखिन्छ :
आखिर जनतामा निराशा कसले फैलाइरहेको छ ? विपक्षीले ? या सत्तापक्षकै कार्यशैलीले ? वा व्यवस्थाकै विरोधीहरुले सरकारविरुद्ध निराशा फैलाएका हुन् ? आम जनतामा देखिन थालेको निराशाको मुहान के हो ? यसको निश्पक्ष जवाफ कतैबाट पनि आउन सकिरहेको छैन।
चार– ओली प्रशासनले अहिले तयार पारेको एउटा भाष्य के छ भने सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ, तर सरकारको विरोध गर्ने बाहनामा यतिबेला व्यवस्थाकै विरोध गर्ने क्रम बढेको छ । हुन त पारस शाहका समर्थकहरुले दुईसाता अघि विमानस्थलमा व्यवस्थाकै विरुद्ध नाराबाजी नगरेका पनि होइनन् । तर, जति सरकारको जति पनि आलोचना हुनछ, त्यो सबै व्यवस्था विरोधीकै चलखेल हो त ? कि अतिदक्षिणपन्थी र अतिवामपन्थी वीचबाट पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ? अनि सरकारको आलोचना गर्नेहरुजति सबै लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तत्वहरु नै हुन् त ?
सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्ने नेकपाकै भीम रावल, माधव नेपाल जस्ता नेताहरु पनि मैदानमा देखिने गरेको वर्गमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारले विपक्षीमाथि गर्ने व्यवहार संकीर्ण र अनुदारवादी देखा परिरहेको विपक्षीहरुको तर्क छ । तर, सत्तापक्ष चाहिँ विपक्षीको यस्तो तर्कलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैन ।
तर, जनताले चाहिँ गणितमा मात्र नभएर प्राप्तिमा, परिणाममा सरकारको भूमिका खोजिरहेको देखिन्छ । गणितीय तथ्यांक र जनअसन्तोषका वीचमा एउटा ‘ब्ल्याकहोल’ देखिँदो छ । सरकार यो ‘ब्ल्याकहोल’ लाई भ्रमको फैलावट ठान्छ र देशव्यापी अभियान चलाएर यसलाई चिर्छु भन्छ । जनताले चाहिँ यसलाई भ्रम नभएर यथार्थ ठानिरहेका छन् भन्ने विपक्षीहरुको दाबी छ ।र, यही विरोधाभाषको कोपभाजनमा फसेको छ सरकार ।
मेलम्चीबाहेक किसुनजीले यो पनि भनेका थिए कि नेपाललाई सिंगापुर बनाउन सकिन्छ ।तीसवर्षे कछुवा गतिका बावजुद अब एकाध वर्षमै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने पक्कापक्की भैसकेको छ । तर, एकाध दशकमै नेपाल सिंगापुरजस्तो बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन । बरु, नेपालका प्रधानमन्त्रीले ‘सपनाको देश’ सिंगापुरमा उपचार गर्न जानुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । स्वदेशमा भरपर्दाे अस्पताल छैन ।
चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल विदेशमन्त्रीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विहीबार बेइजिङबाट काठमाडौं आए । पूर्वमुख्यसचिव समेत रहेका राजदूत पौडेल सुधारवादी प्रशासक मध्येमा पर्छन् । विहीबार उनी सामान्य नागरिकले जस्तै आफ्ना झोलीतुम्बा आफैं उठाएर विमानस्थलबाट बाहिरिँदै थिए।तर, विमानस्थलभित्र पूर्वप्रशासककै छेउमा एक नेपाली युवती रोइरहेकी भेटिइन् । उनी कोरियाबाट रोजगारी गरेर स्वदेश फर्केकी रहिछन् ।
सत्ताधारी दलको अभियान त अब सिर्जना र निर्माणका लागि चलाउनुपर्ने होइन र ? ठूला सपनाहरुको प्राप्तिका लागि सपनाका स–साना उपक्रमहरुको महत्व हुँदैन र ? हजार माइलको यात्रा एउटा पाइलाबाट सुरु गर्नुपर्ने होइन र ?देश किन बनेन र अब कसरी बनाउने भन्नेबारे सिंगापुरमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले पक्कै सोचे होलान् ।
काठमाडौं : श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकलाई कम तलब दिने वा सुविधा नदिने अभ्यास रोजगरादाताबाट हुन खोज्नुलाई स्वभाविक मान्नु पर्ने बताएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको दर्ता कम भएको सवालमा उनले श्रमिकको सुविधा नदिन वा नबढाउने अनेक प्रयत्न हुने कुरालाई स्वभाविक मान्नु पर्ने बताएका हुन्। ‘सुविधा नदिई कामदारलाई काम लगाउन पाइन्छ, […]